Kooxda Barcelona oo laga jabiyay rikoorkii guul dara la,aanta xilli Kooxda Espanyol ay garaacday+SAWIRRO | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
(18-1-2018) ooxda Espanyol ayaa noqotay kooxdii ugu horaysay ee xili ciyaareedkan guuldaro u soo xambaarisay kooxda Valverde ee saddexda tartan ee ay qaybta ka tahay waxayna Espanyol guushan gaadhay dhamaadkii kulankii lugta hore ee Copa Del Rey wareegiisa siddeed dhamaadka iyada oo kooxda Catalans ay guushii ugu horaysay Barcelona ka heshay waqti dheer iyo guuldarooyin badan oo xidhiidh ah kadib.
Gool uu Óscar Melendo dhaliyay daqiiqadii 88 aad ayaa Espanyol ka caawiyay in ay Barcelona guushan muhiimka h ka gaadhay iyada oo Lionel Messi uu qasaariyay rekoodhe uu goolkan ka hore hogaanka ugu dhiibi karay kooxdiisa waxayna Espanyol garoonka Camp Nou iman doontaa iyada oo fursad fiican haysata.
20-sano jir bedel kusoo galay ciyaarta oo lagu magacaabo Oscar Melendo ayaa soo gabo gabeeyey unbeaten-kii ay Barcelona ku socotay tan iyo bishii Agoosto ee sanadkii hore 2017, kaasi oo gool waqti danbe yimid u sababay in kooxdiisa Espanyol 1-0 uga badiyaan Barcelona Lugtii Koobaad quarter-final Copa del Rey iyadoo xidiga Lionel Mesi uu Gool-kulaad ka qasaariyey kooxdiisa.
Barca ayaa lugta labaad ee tartanka ku sugi doonta gurigeeda Cam nou kooxda Espanyol xiligaasoo uu garoonka soo geli doono markii ugu horeeysay xidiga reer Brazil ee Coutinho kaasoo dhowaan kula soo wareegeen lacagtii ugu qaalisaneyd ee ay Barca kusoo qaadato ciyaaryahan.
Kulamadii kale ee dhacay Atletico Madrid ayaa gurigooda lagu garaacay waxaa 2-1 uga badisey kooxda Sevilla,halka kooxda Valencia 2-1 ku garaacdey Deportivo Alaves, Real Madrid ayaa caawa la ballansan Leganes.